विश्वकपले नयाँ विजेता पाउँदै: अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड भिड्दै ! | katipath news
आईसीसी टी-ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेटको उपाधि भिडन्त आज हुँदैछ । उपाधिका लागि अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्ड भिड्ने छन् । दुबईमा हुने उपाधि भिडन्त नेपाली समय अनुसार राति ७:४५ बजे सुरु हुनेछ । दुबई अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट स्टेडियममा मैदान उत्रदा दुबै टिम पहिलो पटक टी-ट्वान्टी विश्वकपको उपाधि उचाल्ने योजनामा हुनेछन् । त्यसैले दुई टिमबीचको खेल रोमान्चक हुने अनुमान गरिएको छ ।
अहिलेसम्म अष्ट्रेलिया र न्युजिल्याण्डले टी-ट्वान्टी विश्वकपको उपाधि उचाल्न सकेको छैन । अष्ट्रेलिया दोस्रो पटक टी-ट्वान्टी विश्वकपको फाइनल पुगेको हो । यस अघि सन् २०१० को संस्करणमा अष्ट्रेलिया फाइनल पुगेको थियो ।
न्युजिल्याण्ड भने पहिलो पटक फाइनल पुगेको हो । यस अघि न्युजिल्याण्डले सेमिफाइनलसम्मको यात्रा तय गरेको थियो । अष्ट्रेलियाले सेमिफाइनलमा पाकिस्तानलाई ५ विकेटले हराएको थियो। न्युजिल्याण्डले सेमिफाइनलमा एकदिवसीय विश्वकप विजेता इंग्ल्यान्डलाई ५ विकेटले नै हराएको थियो ।
Previous Previous post: एमबाप्पेले एक्लै ४ गोल ठोकेपछि फ्रान्स विश्वकपमा जाने पक्का !
Next Next post: राष्ट्रपति भवनमै महिला सैनिक बलात्कृत